Xiisad ka jirta Garoowe iyo shacabka halkaasi oo si diiran usoo dhaweeyay C/raxmaan Faroole (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xiisad ka jirta Garoowe iyo shacabka halkaasi oo si diiran usoo dhaweeyay C/raxmaan Faroole (SAWIRO)
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in maanta ay halkaasi ka jirto xiisad siyaasadeed, kadib markii uu maanta halkaasi soo gaaray madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole).
C/raxmaan Faroole ayaa ka mid ahaa musharixiinta u tartameeysay xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana safarkiisa ku wehlinaayo Cali Xaaji Warsame oo isna ka mid ahaa musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya.
Xiisadaasi siyaasadeed ayaa la sheegayaa inay timid kadib markii madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu amar ku bixiyay inaan lasoo dhaweyn karin C/raxmaan Faroole, iyadoona dadka ku nool magaalada Garoowe ay amarka madaxweyne Gaas ka biyo diideen.
Labadaan musharax ayaa si kulul u weeraray doorkii madaxweyne C/weli Gaas uu ka qaatay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya iyo ololihii uu galay oo ay ku eedeeyeen inuu taageerayay dib u soo noqoshada dowladii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, subaxnimadii maanta ayaa waxaa magaalada Garoowe lagu arkay gaadiid dagaal oo taageersan C/raxmaan Faroole, kadib markii arrintaan soo baxday, iyadoona xiisadaan siyaasadeed ay ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, waxaa sidoo kale magaalada Garoowe ayaa lagu arkay ciidamo hubeysan islamarkaana taageersan C/raxmaan Faroole, waxaana dadkii shacabka ahaa ee isugu soo baxay magaalada ay si diiran usoo dhaweeyaan labada musharax oo taageero weyn ku leh shacabka halkaasi ku nool.